Dowlada Turkiga oo u soo dirtay markab gargaar sida dalka Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Markab ay saaran yihiin in ka badan 11 kun oo tan oo raashin gar gaar ah kuwaas oo loogu talogalay shacabka Soomaalieed ayaa kasoo furtay deked ku taala koofurta wadanka Turkiga magaalada Mersin sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ka tirsan hay’adda bisha cas ee Turkiga.
Ismaaciil Taaka Turun oo ah ku xigeenka gudoomiyaha hay’adda bisha cas ee Turkiga ayaa sheegay in markabkaan oo sida 11 kun oo raashin gargaar ah ay ugu talo galeen dadka Soomaaliyeed ee tabaalaysan.
Sarkaalkaan waxaa uu sheegay in markabku sido raashin u badan bur iyo sokor waxaana uu intaa ku daray inay Soomaaliya usoo dirayaan 178,kun oo xabo oo masaasado ama xafaayado ah oo uu sheegay inay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin.
Madaxa maaraynta masiibooyinka dawlada Turkiga Axmed Catiik ayaa sheegay in markabkaan uu yahay kii 12,aad ee ay Soomaaliya usoo diraan tan iyo sanadkii 2011 kii taasoo ka dhigaan in gargaarka Turkiga uu Soomaaliya u soo diray ay gaarayso 62 kun oo Ton.
Markabka sida gargaarkan oo lagu magacaabo Marshal Lila Majuro ayaa sidoo kale geyn doona gargaar cunto ah maamulada Somaliland iyo Puntland.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 10-09-2016